अर्थतन्त्रका प्रधान सम्पादक कार्की ʽनाट्टा मिडिया अवार्ड २०१६ʼ द्वारा सम्मानित - Arthatantra.com
अर्थतन्त्रका प्रधान सम्पादक कार्की ʽनाट्टा मिडिया अवार्ड २०१६ʼ द्वारा सम्मानित
काठमाडौ । अर्थतन्त्र डटकमका प्रधान सम्पादक रामेश्वर कार्की नाट्टा अवार्ड –२०१६ बाट सम्मानित भएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) ले हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारलाई प्रदान गर्ने पुरस्कार यस वर्ष अनलाईनतर्फ (अर्थतन्त्र डटकम) कार्कीलाई प्रदान गरिएको हो ।
नाट्टाको स्वर्ण जयन्ती तथा २१ औं सम्मेलनको अवसरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नगद सहित अवार्ड हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सोही अवार्डबाट नागरिक दैनिकका पोखरा रिपोर्टर सन्तोष पोखरेल, एबिसी टेलिभिजन र अर्थ र व्यापारका नवीन काफ्ले पनि सम्मानित भएका छन् ।
कार्यक्रममा नाट्टालाई सहयोग पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्व एवं पूर्व अध्यक्षहरुलाई पनि सम्मान गरिएको छ ।
२१ औं सम्मेलन एवं स्वर्ण जयन्ती समारोह काठमाडौं स्थित याक एण्ड यति होटेलमा चलिरहेको छ । कार्यक्रममा पूर्व पर्यटन मन्त्री एमाले नेता प्रदिप ज्ञवली, पर्यटन राज्यमन्त्री ईन्द्र बानिया, पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
नाट्टा प्रथम उपाध्यक्ष एवं स्वर्ण जयन्ती समारोह संयोजक सिएन पाण्डेले अतिथि एवं सहभागी र सहयोग पुर्याउनेलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । नाट्टाका अध्यक्ष मधुसुदन आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा पर्यटन क्षेत्रका संघ, संस्था, ४० भन्दा बढि विदेशी पर्यटनविज्ञ अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
ʽनेपालको पर्यटन राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगʼ भन्ने मूल नारा रहेको सम्मेलनमा उक्त विषयलाई केन्द्रित गर्दै विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत भईरहेका छन् ।
गोल्डेन जुब्ली र कन्भेन्सनले पारित गरेका एजेण्डालाई १० डिसेम्बर अर्थात् २५ गतेको साधारणसभाले अनुमोदन गर्नेछ । सन २०१८ को जनवरीको सुरुमा गोल्डेन जुब्लीको समापन समारोह गरिने नाट्टाले जनाएको छ ।
२४ मंसिर २०७३, १।००
सेयर बजार : ‘एभ्री ट्रेण्ड इज योर फ्रेन्ड’, तपाई कत्तिको मान्नुहुन्छ ? काठमाण्डौं । सेयर बजारमा एउटा भनाई छ, ‘एभ्री ट्रेण्ड इज योर फ्रेन्ड’ अर्थात् बजारको जुनै […]
तपाईले जान्नैपर्ने र सेयर बजारमा हुनसक्ने अर्काे अपराधʽसेयरको भण्डारीकरणʼ! हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौ । तपाईलाई थाहा छ, सेयरको भण्डारीकरण गरेर पनि बजारमा अनियमितता […]
औषधी उद्योग पुनः संचालनमा आउँदै, १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने ! काठमाण्डौं । सरकारले नेपाल औषधी उद्योग पुन सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो औषधी उद्योग […]